Nandritra ny fahaterahan'ny olona iray ho an'ny fiainany, ny sainy sy ny toetrany, ankoatra ny fototarazo sy ny biôlôjia, dia misy fiantraikan'ny kintana sy planeta ny toerana misy azy. Io teoria io dia lava sy mafy orina eo amin'ny fiarahamonina. Indrisy anefa, mba hanamafisana izany, tahaka ireo teoria maro hafa, dia tena olana, fa, ny iray na ny iray, manana mpankafy maro izy.
Fantatra fa ny olona sasany dia manana toetra mitovy na tarehimarika toy izany , dia mora amin'ny fitondran-tena mitovy amin'ny toe-javatra mifanohitra na mandritra ny fiarahany. Na kintana na zavatra hafa dia ho an'ny tsy fantatra. Saingy, raha afaka mieritreritra imbetsaka isika hoe inona no miandry antsika eo am-pandriana miaraka amin'ity mpiara-miasa ity na ny mpiara-miasa, nahoana isika no tsy hianatra izany? Ny firaisana ara-nofo amin'ny famantarana ny zodia dia tena malaza eo amin'ny vehivavy: raha ny marina dia te-hahafantatra aho raha toa ka hifanaraka amin'ity mpanjaka mahafinaritra ity izy ireo, izay niseho vao haingana teo amin'ny fiainan'izy ireo, nifanaraka tamin'ny firaisana?
Ny famantarana ny zodiac sy ny firaisana ara-nofo
Sexuality an'ny Libra. Manome fiheverana goavana eo amin'ny lafiny intellectual ilay olana io famantarana io. Tsy manana fahafinaretana ara-nofo maro izy ireo - ny maha-tokana sy ny fifankahazoan-kevitra amin'ny mpifankatia eo am-pandriana dia midika ho azy ireo.
Sexuality of Capricorn. Ity famantarana eto an-tany ity dia tena mora foana amin'ny mpiara-belona aminy. Ho an'ny ampahany betsaka, dia manjavozavo izy ireo, noho izany dia midika izany fa be dia be ho azy izy (raha mazava fa tena fitiavana i Capricorn). Mazava ho azy fa hihetseham-po ary hihaino tsara eo am-pandriana izy, hihaino ny fanirian'ny hafa.
Fahadiovan'ny Gemini. Ny kambana eo am-pandriana dia tsy misaina. Avelao izy ireo tsy hanana fisainana miavaka, fa izy ireo dia vonona foana hanohana ireo fanandramana napetraka!
Sexuality of Aquarius. Tahaka ny famantarana ny rivotra rehetra, ny Aquarius ao am-pandriana dia tsy ny vatany fotsiny. Zava-dehibe ny mahatakatra sy manampy azy hisokatra, tsy misy henatra ny matoky anao, ary avy eo dia hanana firindranao tena izy!
Sexuality of Scorpio. Ireo olona ireo dia manana hery sy hery goavana - ity dia afaka mandeha ho an'ny tombontsoa sy ny loza. Ao am-pandriana, azo ovaina, indraindray "ao an-tsaiko." Ny firaisana ara-nofo sy ny fiainany dia mitarika fanentanana, hany ka miankina amin'ny fahatokiananao ny fahombiazany.
Sexuality of Taurus. Ho an'ny ombilahy, ny firaisana dia manana toerana iray manan-danja eo amin'ny fiainana, noho izany dia ara-logika fa matetika izy ireo no tena tsara fanahy. Mandrisika ny fampiononana izy ireo, ka tiany ny maneho fitiavana ao an-trano.
Sexuality of Cancer. Raha vitanao ny hiantso azy ho resaka mifono fitokisana, ny kansera dia hanandrana hanaraka ny fangatahanao rehetra na ny faniriana miafina, ary avy eo dia hanolotra anao ny fahafinaretana tsara indrindra sy tsy misy henatra. Mifanaraka bebe kokoa amin'ilay mpiara-miasa, fa tsy mitarika ny tenany.
Firaisana ara-nofo amin'ny Pisces. Ny trondro dia tena tarihan'ny fanentanana an-tsitrapo. Mpinamana, maotina sy tony izy ireo. Fantatr'izy ireo izany fepetra izany, saingy tsy hilavo lefona izy ireo. Tsy mahazatra loatra na tsy mahalala fomba.
Sexuality ny Liona. Ny Liona dia miezaka ny ho tsara indrindra sy amin'ny zavatra rehetra. Ny zava-dehibe ho azy ireo dia ny mahafantatra fa tsy misy na iza na iza izay tsy tsara anao! Ary amin'izay, raha toa ny lolom-bavaky ny liona matory, dia azonao atao ny manitsy ny fihetsikao rehetra, raha toa ianao manokana zavatra manokana.
Aries Sexuality. Aries dia famantarana famantarana. Ao am-pandriana, tsy mitebiteby, milamina ary tena mientanentana be. ho vonona amin'ny fitiavana! Na, angamba, tsy maintsy hampianatra azy ireo be dia be ianao.
Firaisana ara-nofo avy amin'ny sagittarius. Sagittarius - iray amin'ireo famantarana marin'ny zodiaka. Faly aho mihaino ny fanirianao ary maneho ny tenako. Tiany ny mifaly amin'ny firaisana.
Sexuality Dev. Virgo, na eo amin'ny fiainana sy eo am-pandriana, dia tsy hamela ny fandikana ny zony sy ny faniriany. Raha mbola manome azy ireo izay ilainy ianao dia hanao zavatra betsaka ho anao izy ireo, izany no tokony handraisanao anjara. Tia fitiavana sy fampiononana izy ireo. Inwardly sensitive.
Ahoana no hampijanonana ny masturbation?
Ahoana ny fomba famerenana menelatra amin'ny lehilahy?
Ahoana no hanomezana zaza paracetamol?
Ahoana no hahatonga anao ho matoky tena amin'ny vehivavy?
Zana-tsaramaso no tsara na ratsy
Ny mahomby amin'ny fahombiazana
Vavaka amin'ny andro nahaterahana hahatanteraka ny faniriana, ny fitiavana, ny fanambadiana ary ny fahasalamana
Achilles bursitis - fitsaboana
Ny bwonchitan'ny zaza tsy ampy taona - fitsaboana